Puntland oo lagu eedeeyay caburinta Saxaafadda | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo lagu eedeeyay caburinta Saxaafadda
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa baaritaan ku eedeysan maamulka Puntland, uguna baaqday in ay joojiyaan dhibaatooyinka ka dhanka ah Saxaafadda.
GAROWE, Soomaaliya - Mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan xorriyadda warbaahinta iyagoo cabsi gelinaya, dhibaateeynaya, isla markaana si aan macquul ahayn u xira saxafiyiinta ka hor doorashooyinka Madaxweynaha iyo Baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegtay Amnesty International.
"Kordhinta xadhiga suxufiyiinta Puntland waxay muujineysaa cadaadiska sii kordhaya ee lagu hayo xorriyadda warbaahinta". ayaa lagu yiri war ka soo baxay Amnesty International.
Afar weriye ayaa si aan sharci ahayn loogu xiray caasimadda Puntland ee Garowe iyo magaalada xeebeedka Bosaaso labadii bilood iyo barkii la soo dhaafa,y taas oo walaac ku abuureysa wariyayaasha, wiiqeysana xorriyadda saxaafadda.
“Xariga wuxuu khatar ku yahay shaqada suxufiyiinta, xorriyadda warbaahinta iyo xuquuqda xorriyadda hadalka. Masuuliyiintu waa inay dhaqankan soo afjaraan, oo ay ixtiraamaan, ilaaliyaan, xuquuqda aadanaha ee qof walba iyo xorriyadda warbaahinta. ” ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Amnesty International.
Kilwe Aadan Faarax, oo ah weriye madax-bannaan, ayaa Puntland u xiran tan iyo 27-kii Diseembar 2020, halka maxkamad milateri ay ku xukuntay saddex bilood oo xabsi ah.
22-kii Febraayo 2021, booliiska ayaa magaalada Boosaaso ku xiray wariye Axmed Bootaan Carab, kadib markii uu wareysi ka qaaday shacabka Boosaaso, kuwaas oo ka fal celiyay Khudbad uu jeediyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
25-kii Febraayo, weriye kale, oo la yiraahdo Cabdifataax Cabdullaahi Faarax, oo loo yaqaan "Jiib", ayaa saraakiil ka tirsan booliisku ku xireen magaalada Garoowe, Weriyaha Telefishanka Soomaaliyeed, ayaa muddo saacado ah ku xirnaa su’aalona lagu weydiiyay saldhiga dhexe ee magaalada Garoowe iyadoo markii dambe isla maalintas la siidaayay iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin.
“Maamulka Puntland waa inuu joojiyaan dhamaan eedeymaha aan salka laheyn ee ka dhanka ah Kilwe Aadan Faarax isla markaana si deg deg ah oo shuruud la’aan ah looga sii daayo xabsiga. Sidoo kale waa inay joojiyaan dhibaateynta iyo cagajugleynta saxafiyiinta kale, oo ay ka mid tahay in la marsiiyo maxkamad militari taasoo ka hor imaaneysa sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha, ”ayuu yiri Deprose Muchena.